SemiRestore yeIOS 8 ikozvino yave kuwanikwa. Dzosera mudziyo wako pasina kurasikirwa neJailbreak | IPhone nhau
SemiRestore yeIOS 8 ikozvino yave kuwanikwa. Dzosa mudziyo wako pasina kurasikirwa jailbreak
IPad nhau | | Cydia, iOS 8
SemiRestore chishandiso chakatozivikanwa kune vazhinji Jailbreak vashandisi mune yapfuura shanduro dzeIOS. Chishandiso chakanakisa chekugona kudzoreredza chako kifaa pasina kurasikirwa neJailbreak inosvika panguva chaiyo, apo Apple yaburitsa iOS 8.1.1, vhezheni isingaenderane nePangu Jailbreak, uye nekudaro Izvo zvichatibvumidza isu kuti tigadzirise zvikanganiso mune yedu kifaa neIOS 8.1 pasina chikonzero chekudzoreredza uchishandisa iTunes uye kurasikirwa nehusungwa. Inowanikwa yeWindows neLinux, munguva pfupi zvakare yeMac, iri basa rakakosha kune chero munhu ane Jailbroken.
SemiRestore inowanikwa kurodha pasi kubva iyo yepamutemo webhusaiti, zvechokwadi mahara zvachose. Inoenderana nechero vhezheni yeIOS kubva pa5.0 kusvika ku8.1, uye inogona kukuburitsa kunze kwekusungira muchiitiko chekuti mudziyo wako wave kusagadzikana, kunonoka, kana kutopinda muchiuno chekuenderera mberi kwema reboots. Unofanira chete chengeta izvi zvakakosha kwazvo mupfungwa kuti uishandise uye uwane zvibodzwa zvakavimbiswa:
Unofanirwa kunge uine OpenSSH yakaiswa pane yako kifaa. Iyo pasuru yemahara yauinayo muCydia uye yaunofanirwa kuisa kana zvangoitika.
Parizvino SemiRstore inongowirirana neWindows (XP uye gare gare) uye Linux (32 uye 64 mabheti, Ubuntu 14.04 kana gare gare)
Vashandisi veWindows vanofanirwa kuve neTunes uye .NET 4.0 yakaiswa.
Vashandisi veLinux vanofanirwa kuve ne libimobiledevice, GTK 3, libusbmuxd-tools, uye openssl yakaiswa, iyo inofanirwa kuiswa ne default.
Iishandise sekupedzisira sarudzo, semuenzaniso, kana mushure mekutanga mune yakachengeteka mode (kudzvanya vhoriyamu kumusoro bhatani pakutangazve) haugadzirise mabugs.
Ndapota chengetedza data yako usati washandisa iyi purogiramu.
Usashandise iTunes kana Xcode uchishandisa SemiRestore
Panguva yekuita izvi chishandiso chako chinotangazve uye chichifema kanoverengeka, zvakajairika, usachimedura kusvikira waona kuti chapera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Cydia » SemiRestore yeIOS 8 ikozvino yave kuwanikwa. Dzosa mudziyo wako pasina kurasikirwa jailbreak
Luis, ndinoda kuziva kuti inoshanda sei kana yaiswa, ndiko kuti, iwe unofanirwa kugadzirisa chimwe chinhu kana icho chiripo uye iwe unogona Kudzorera pasina matambudziko?
Pindura kuna jumarte
tarisa iyi vhidhiyo kwandinoyedza: http://www.youtube.com/watch?v=tYfmwFv1IL0
SemiRestore yeIOS 8 uye iOS 8.1 ikozvino yave kuwanikwa
6 Matimu echando echando kuti unyatsogadzirisa yako iPhone